By Htet Wai Aung - October 14, 2016
== ၁ ==
ကျွန်တော်ဟာ.. မြန်မာယူနီကုဒ်ကို.. ဟိုး ၂၀၀၈ ခုနှစ်လောက်က.. မြန်မာအိုင်တီပရိုဆိုတဲ့ နည်းပညာရပ်ဝန်းမှာ စတင်တွေ့ရှိ လာရာကနေ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်။ အခုဆိုရင် (၈) နှစ်လောက် ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုစသိပြီး.. ဘယ်ကနေ ဘယ်လို စသုံးဖြစ်သလဲ ဆိုတာတောင် တိတိကျကျ မမှတ်မိတော့ပါဘူး။ မှတ်မိတာကတော့.. အဲ့ဒီအချိန် မတိုင်မီက ဇော်ဂျီဖွန့်ကိုသာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး ယူနီကုဒ်ကို အစောပိုင်း (အပိုတွေ လုပ်တယ်ထင်လို့) ဆန့်ကျင်ဖြစ်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ နောက်တော့မှ နားလည်တဲ့သူတွေ ရှင်းပြတာကို ကြားရတဲ့အခါ နည်းပညာသမား တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အားလျှော်စွာ ရနိုင်တဲ့ အကျိုးရလဒ်ကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်လာတဲ့အတွက် ယူနီကုဒ်ကို ကိုယ်တိုင် စတင် အသုံးပြုလာသလို၊ "ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေး" ကိစ္စတွေမှာ စတင် ပါဝင်ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ယူနီကုဒ်အကြောင်း ဇော်ဂျီနဲ့ရေးပြီး ပြောလို့ဆိုပြီး အလှောင် ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
တစ်ကယ်တော့ "ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေး" ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒီအချိန် ကတည်းက "နည်းပညာသမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ တာဝန်ရှိတယ်" လို့ ယူဆတဲ့အတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး တစ်ကိုယ်ရေ အကျိုးအတွက် လုပ်ခဲ့တာ တစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။ ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုကြမှသာ ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် ရှေ့တက်လှမ်း နိုင်မယ်ဆိုတာကို နားလည်လို့၊ ယုံကြည်လို့သာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့် ကွန်ပျူတာ နည်းပညာတွေကို မြန်မာလူမျိုးတွေ မြန်မာဘာသာနဲ့ အသုံးပြုခွင့် ရရှိလာစေချင်လို့သာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာဘာသာနဲ့ ရေးသား ဖန်တီးထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို ကိုယ်တိုင်လည်း ရေးချင်၊ အခြားသူတွေလည်း ရေးသားကြ စေချင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေးကို ဖြစ်ပေါ်စေလိုတဲ့ ဆန္ဒသာရှိပြီး ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်း မသိပါဘူး။ ကိုယ်လို စိတ်ကူးတူသူတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြီး ကောင်းနိုးရာရာကိုသာ လုပ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ပထမဆုံးရရှိတဲ့ အိုင်ဒီယာကတော့၊ အင်တာနက်ပေါ်က လူဖတ်များတဲ့ စာရေးသူတွေ ယူနီကုဒ်နဲ့ စာရေးကြရင် (သူတို့စာကို ဖတ်ချင်တဲ့အတွက်) လူတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ယူနီကုဒ် ပြောင်းသုံးကြလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာပါပဲ။ မနူးမနပ်ဆိုတော့ မသိလိုက်တာက၊ အဲ့ဒီနာမည်ကြီး စာရေးသူတွေဟာ ကိုယ်လို နည်းပညာသမားချည်း မဟုတ်တော့၊ အလုပ်ပိုတွေလို့ ထင်ကြတာရယ်၊ စာဖတ်သူ တစ်ဦးတစ်လေတောင် အလျော့ မခံနိုင်ဘူး ဆိုတာရယ်၊ (ကိုယ်မသိခဲ့တဲ့) ဇော်ဂျီဖွန့်နဲ့ ယူနီကုဒ်ရဲ့ နောက်ခံ သမိုင်းကြောင်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အခြေပြု အစွဲတွေ ရှိနေတာရယ်ကို မသိလိုက်တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် လက်တွေ့မှာ နည်းပညာသမား စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ စာရေးသူတွေက လွဲရင် တစ်ခြားသူတွေကို တိုက်တွန်းနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်လည်း နည်းပညာစာတွေ ရေးလေ့ ရှိတော့ ကိုယ်တိုင်တော့ ယူနီကုဒ်သီးသန့်နဲ့ စတင်ရေးသား ဖြစ်ခဲ့တာ အခုချိန်ထိပါပဲ။
မြန်မာအိုင်တီပရိုဆိုတဲ့ နည်းပညာရပ်ဝန်းမှာလည်း ယူနီကုဒ်နဲ့ ဇော်ဂျီရောသွားပြီး ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဖြစ်ကုန်လို့၊ ဟိုလူက ဟိုစာဖတ်မရ၊ ဒီလူက ဒီစာဖတ်မရနဲ့ နောက်ဆုံး ပျက်လုမတက် ဖြစ်သွားခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထပ်မံနားလည် လိုက်တာက.. ယူနီကုဒ် ကူးပြောင်းရေး လုပ်တဲ့အခါ မထိတစ်ထိ သွားလုပ်လို့ မရဘူး။ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်မှရမယ်လို့ နားလည်လာပါတယ်။ ဖြည့်စွက် နားလည်လာတဲ့ အချက်ကတော့၊ ဒီကိစ္စကို လူတစ်ဦး (သို့) လူတစ်စုက လုပ်အားပေး လုပ်လို့မရနိုင်ဘူး၊ အခိုင်အမာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုကသာ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့် ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ နားလည် လာခဲ့ပါတယ်။
== ၂ ==
ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာကိစ္စနဲ့ သက်ဆိုင်ဖွယ်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို လေ့လာ ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ MCF, MCPA စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရယ် Myanmar NLP လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းရယ် ရှိနေတာကို စတင်သိရှိ လာပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်အခါ အရဆိုရင် Myanmar NLP ကတော့ ပိုပြီး တာဝန်ရှိတဲ့ သဘော ရှိပါတယ်။ Myanmar3 ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်၊ လိုအပ်နေတဲ့ ယူနီကုဒ် ပြောင်းလဲရေး ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဓိကကတော့ အရင်စစ်အစိုးရ လက်ထက် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းပီပီ၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အလွဲတွေ၊ အထက်အမိန့် အတိုင်းသာ လုပ်ကြရတာတွေ၊ လူထုဆက်ဆံရေးကို ဂရုမစိုက် တာတွေကြောင့် ဖြစ်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ Myanmar NLP အဖွဲ့ထဲမှာ တစ်ကယ်ကြိုးစားပြီး စိတ်အား ထက်သန်သူတွေ ရှိပေမယ့်လည်း သက်မှတ်ဘောင်ထဲမှာ နေရသူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့လည်း ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ် လုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြပါဘူး။ နောက်တော့ ငွေစားရင်းပိုင်း အလွဲသုံးစားမှုလို ပြဿနာတွေ တက်ပြီး အဖွဲ့ ဖျက်လိုက်ရတဲ့အထိ ဖြစ်သွားပါတယ်။
တစ်ဆက်တည်းသိရှိလာတာက ဇော်ဂျီဖွန့်ဖြစ်ပေါ်လာမှုရဲ့ နောက်ကွယ်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖွန့်ဟာ မြစေတီလို့ခေါ်တဲ့ ဖွန့်ကို ကူးယူ ဖန်တီးထားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ မြစေတီဟာ အခပေး နည်းပညာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချို့သူများက အခမဲ့ရတဲ့ ဇော်ဂျီဖွန့်ကို.. အခပေးဖွန့်ဖြစ်တဲ့ မြစေတီထံကနေ.. ပြည်သူတွေကို ကယ်ဆယ်ခဲ့သူ ကယ်တင်ရှင်ကြီးလို့ မြင်ကြပုံ ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်က ကျွန်တော် ဇော်ဂျီ မကောင်းကြောင်း ပြောမိလို့ "မင်းက တိုင်းပြည်အတွက် ဘယ်လောက် လုပ်ပြီးလို့ ဒီစကား ပြောတာလဲ" လို့ အမေးခံခဲ့ရ ပါတယ်။ ဇော်ဂျီဖွန့်ကို တိုင်းကျိုးပြည်ပြု အရာတစ်ခုလို့ ထင်မြင်ယူဆ ထားကြတဲ့ သဘောပါ။ မူပိုင်ခွင့်ကို အလေးထားသူ တွေကတော့ ဇော်ဂျီကို ခိုးကူး ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ မြင်ကြတဲ့အတွက် ဒီလူနှစ်စုကြားထဲမှာ ညှိနှိုင်းလို့ မရခဲ့တာ ကနေ့အချိန်ထိပါပဲ။ နောက်တော့၊ ယူနီကုဒ်ကို ထောက်ခံသူဆိုရင် ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ဒုတိယအုပ်စုထဲ ထိုးထည့်ပြီး ဇော်ဂျီမုန်းသူလို့ နာမည်တပ် လာကြပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ကို အကြောင်း မသိသေးလို့ အလုပ်ရှုပ်တယ် ထင်သူတွေ ဟာလည်း အလိုလို ပထမအုပ်စုထဲ ရောက်ကုန်ပြီး ဇော်ဂျီ ထောက်ခံသူတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။
ပြဿနာက အဲ့ဒီအချိန်၊ MCF တို့ MCPA တို့မှာ ဦးဆောင်နေသူတွေက ဇော်ဂျီ လိုလားသူတွေ များနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကနေ့အချိန်ထိ များနေ ဆဲပဲလားတော့ ကျွန်တော်လည်း မပြောတက်ပါဘူး။ နည်းပညာ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဦးဆောင်နေသူ တွေအနေနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ဖယ်ပြီး နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသာ အလေးထား ရှေးရှုကြမယ်ဆိုရင် ယူနီကုဒ် ပြောင်းလဲရေးဟာ မဖြစ်မနေ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကို ပိုအလေးထား ခဲ့ကြပုံရပြီး၊ တစ်ချို့ ယူနီကုဒ်ကို ဗြောင်ဆန့်ကျင် ကြသလို တစ်ချို့လည်း ဗြောင် မဆန့်ကျင်ပေမယ့် မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြပါတယ်။ အလယ်အလတ် ကျသူတွေ ရှိပေမယ့် ဇော်ဂျီလိုလားသူတွေ ညိုညင်မှာ စိုးလို့လား၊ ဘာလားတော့ မသိပါဘူး။ သူတို့လည်း မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြ တော့တာပါပဲ။ ဇော်ဂျီဖွန့်ကို MCPA Excellent Award ဆိုပြီး (၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ ဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်) ဆုတောင် ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။
== ၃ ==
အဲ့ဒါနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကိုးလို့မရတဲ့အတွက်.. စိတ်အား ထက်သန်သူတွေ ကိုယ်နည်း ကိုယ်ဟန်နဲ့ပဲ ဆက်လုပ်ခဲ့ကြ ပါတယ်။ မှတ်မိသလောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာတစ်ကြိမ်၊ ၂၀၁၄ မှာတစ်ကြိမ် လှုပ်ရှားမှုပေါင်း များစွာနဲ့ တက်နိုင်သလောက် အင်တိုင်အားတိုက် ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ၂၀၁၁ လှုပ်ရှားမှုမှာဆိုရင် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်နေ့ကစပြီး လူတိုင်း ယူနီကုဒ် ပြောင်းသုံးနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက် မျိုးတွေထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၄ လှုပ်ရှားမှုမှာတော့ ကျွန်တော့် သမီးလေး မွေးဖွားခါနီးနဲ့ မွေးဖွားစ ဖြစ်နေလို့ ကျွန်တော် ထဲထဲဝင်ဝင် ပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှု အကြောင်း အသေးစိတ်တော့ မသိပါဘူး။ ရလဒ်အနေနဲ့ Myanmar Unicode Area (MUA) လို အဖွဲ့တွေ ပေါ်ထွက် လာတာကိုသာ သိရှိလိုက်ရပါတယ်။
ဒီလှုပ်ရှားမှု ကာလတွေမှာ ဝိုင်းဝန်း ဆောင်ရွက် ခဲ့တာတွေကတော့ -
၁.) မြန်မာယူနီကုဒ်ဖွန့် အမျိုးမျိုး ထွက်ပေါ်လာရင် လူတွေ စိတ်ဝင်စားလာကြမယ် ထင်လို့ ဖွန့်တွေ အမျိုးမျိုး ဖန်တီး ထွက်ပေါ် လာခဲ့ပါတယ်။
၂.) မြန်မာယူနီကုဒ်အကြောင်း ရေးသားဖော်ပြတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေရှိရင် လူတွေ သိသင့်တာသိပြီး လိုက်သုံးလာမယ် ထင်လို့ ယူနီကုဒ်အကြောင်း ဝဘ်ဆိုဒ်တွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၃.) မြန်မာဘာသာနဲ့ သုံးလို့ရတဲ့ OS တွေရှိရင် လူတွေ သုံးလာကြမယ် ထင်လို့ မြန်မာဘာသာ OS တွေ လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၄.) ယူနီကုဒ်လက်ကွက်ကို ဇော်ဂျီလက်ကွက်အတိုင်း အတိအကျတူအောင် ရိုက်လို့ရတဲ့ လက်ကွက်ရှိရင် လက်ရှိဇော်ဂျီသုံးသူတွေ ပြောင်းသုံး လာမယ်ထင်လို့ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
၅.) ဇော်ဂျီ - ယူနီကုဒ် အပြန်အလှန် ပြောင်းလို့ရတဲ့ Converter တွေ အမြောက်အများ ပေါ်လာရင် ပြောင်းသုံးကြမယ်ထင်လို့ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
၆.) ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ ဇော်ဂျီ - ယူနီကုဒ် နှစ်မျိုး အလိုအလျှောက် ပြောင်းပြနိုင်ရင် ပြောင်းသုံးကြမယ် ထင်လို့ ပြောင်းလို့ရတဲ့ နည်းပညာတွေ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
၇.) ယူနီကုဒ်နဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ အသုံးဝင်တဲ့ နည်းပညာတွေရှိရင် ပြောင်းသုံး ကြလိမ့်မယ် ထင်လို့ ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။
၈.) One-Click Installer လို့ခေါ်တဲ့ ယူနီကုဒ်သုံးဖို့အတွက် လိုသမျှ အားလုံးကို တစ်ကြိမ်းတည်းနဲ့ ပြည့်စုံအောင် သွင်းလို့ရတဲ့ နည်းပညာရှိရင် သုံးလာကြ လိမ့်မယ်ထင်လို့ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
၉.) ဇော်ဂျီရော ယူနီကုဒ်ပါ နှစ်ခုလုံး ဖတ်လို့ရတဲ့ဖွန့်ရှိရင် သုံးမယ်ဆိုလုပ် လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
၁၀.) ယူနီကုဒ်အကြောင်း စာအုပ်တွေ ဘာတွေထွက်ရင် လူတွေပိုသိပြီး သုံးလာကြ လိမ့်မယ်ထင်လို့ ရေးပြီး ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
၁၁.) Windows မှာ မြန်မာယူနီကုဒ် အသင့်ပါလာရင် သုံးမယ်လို့ မျော်လင့်ပေမယ့် တစ်ကယ်ပါလာတော့လည်း မသုံးကြဘူး။
၁၂.) Google တို့ Facebook တို့က ယူနီကုဒ်သုံးရင် လူတွေလည်း လိုက်သုံးလာကြမယ် ထင်ပေမယ့် လက်တွေ့မှာ မသုံးကြဘူး။
၁၃.) မိုဘိုင်းဖုန်းတွေမှာ မြန်မာယူနီကုဒ် တစ်ခါတည်းပါလာရင် သုံးမယ် ထင်ပေမယ့် မသုံးကြပါဘူး။ ပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့ ဇော်ဂျီထည့်သုံးကြပါတယ်။
တစ်ခြား ကျွန်တော် မမှတ်မိတော့ တာတွေလည်း အမြောက်အမြား ကျန်ပါလိမ့်ဦးမယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင် ပြောင်းလဲရေး အတွက် နည်းပညာအရ လိုအပ်တာတွေ အားလုံး စုံနေပါပြီ။ ဒါတွေအားလုံး လက်တွေ့ ဖြစ်မြောက် လာခဲ့ပေမယ့်လည်း လူတွေ ယူနီကုဒ် ပြောင်းသုံးကြခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ ရရှိလာတဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ ပြောစရာဆိုလို့ လူတစ်ချို့ ယူနီကုဒ်ဆိုတာ ဘာလဲ သိလာကြတယ်၊ စိတ်ဝင်စား လာကြတယ်၊ ဒီလောက်ပါပဲ။
အခု ဒီစာကို ဖတ်မိသူတွေထဲက နားမလည်သူတွေက ပြောကြဦးမှာ သေချာပါတယ်။ "အခုလည်း အဆင်ပြေနေတာပဲ"။ "ယူနီကုဒ်ကို ဇော်ဂျီနဲ့တူအောင် လုပ်လို့မရဘူးလား"။ "ယူနီကုဒ်ကို လွယ်အောင်လုပ်ပေးမှ လူတွေသုံးကြမှာပေါ့"။ စသဖြင့် ပြောကြဦးမျာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါတွေအတွက် ရှိပြီးသားနဲ့ ဖြေပြီးသားအဖြေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ ဖြေခဲ့ကြရတာလည်း မောနေပါပြီ။ အခု အဆင်ပြေတယ် ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စာပို့လိုရယုံ၊ စာဖတ်လို့ ရယုံသာ အဆင်ပြေတာပါ။ ဒီထက်အဆင့်မြင့်တဲ့ သတ်ပုံစစ်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ်တွေ၊ သဒ္ဒါစစ်ပေးနိုင်တဲ့ စနစ်တွေ၊ အလိုအလျောက် ဘာသာပြန်စနစ်တွေ၊ ပုံစာကို ကွန်ပျူတာက နားလည်စေနိုင်တဲ့ စနစ်တွေ၊ မြန်မာစာကို စနစ်တကျနဲ့ တိတိကျကျ သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်း၊ ပြန်လည်ရယူခြင်း ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဒေတာဘေ့စ် စနစ်တွေ၊ မြန်မာဘာသာသုံး ဉာဏ်ရေတု စနစ်တွေ၊ ဒါတွေတော့ တစ်ခုမှာ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလောက်ထိ လုပ်ခဲ့ကြပေမယ့် လက်တွေ့ ဖြစ်မြောက်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် တစ်ချို့ အားလျော့လာခဲ့ ကြပါတယ်။ "တစ်နေ့တော့ ဖြစ်လာ ပါလိမ့်မယ်လေ" လို့ ဖြေတွေးရင်းနဲ့သာ နေလာခဲ့ကြ ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ NLD အစိုးတက်တက်ပြီး အစိုးရတွေ ဘာတွေတောင် ပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ယူနီကုဒ် ပြဿနာကတော့ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပဲ ဒုံရင်းကဒုံရင်း ဖြစ်နေခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု ဖြစ်နေပါပြီ။ ကွန်ပျူတာ ခေတ်ကနေ မိုဘိုင်းဖုန်း ခေတ်ကို လုံးလုံး ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီ။ ယူနီကုဒ် ကိစ္စကတော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းပါပဲ။
ဘာကြောင့်ဒီလောက် ပြောင်းရ ခက်နေသလဲဆိုရင် ကွန်ယက် ညိချောင်ပိတ်ဖြစ်စဉ် ကြောင့်ပါ။ ကွန်ယက်ညိ ချောင်ပိတ် ဖြစ်စဉ်ကြောင့် မိမိပြောင်းရင် မိမိနဲ့ ဆက်သွယ်နေသူတွေက မိမိပေးပို့တဲ့စာကို ဖတ်မရ၊ မိမိနဲ့ ဆက်သွယ်နေသူတွေ ပြောင်းရင် သူတို့ပေးပို့တဲ့စာကို မိမိကဖတ်မရ၊ စသဖြင့် အပြန်အလှန် ချိတ်ဆက်မှု ကွန်ယက်ထဲမှာ အပြန်အလှန် ညိတွယ်ပိတ်မိ သွားတဲ့အတွက် ပြောင်းမရဖြစ်ကုန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်က အင်တာနက် အသုံးပြုသူ သိန်းဂဏန်းပဲ ရှိစဉ်ကတောင် အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့တဲ့ ကိစ္စဟာ အခုဆိုရင် အင်တာနက် အသုံးပြုသူ (၁၀) သန်းကျော် ရှိလာပါပြီ။ ပိုပြီးတော့တောင် ခက်သွားပါပြီ။
ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်း အောင်မြင်ချင်ရင် လုပ်လို့ရတာ တစ်ခုတည်းပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ လက်ရှိ ဇော်ဂျီအသုံးပြုနေသူ (၁၀) သန်းကျော် ယူနီကုဒ်ကို တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်းတည်း ပြောင်းလဲကြဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကလွဲရင် တစ်ခြားနည်း မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီနည်း ဖြစ်မြောက်ဖို့ အတွက် လူတစ်ဦး တစ်ယောက် (သို့) လူတစ်စုက လုပ်လို့မရနိုင်တာ အသေအချာပါပဲ။ အခိုင်အမာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် (သို့) အစိုးရ ကိုယ်တိုင်က လုပ်မှပဲ ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
== ၄ ==
အခြေအနေကတော့… ကျွန်တော်တို့လို ပြင်ပက လုပ်အားပေး စိတ်အား ထက်သန်သူတွေ ရှေ့ဆက်လုပ်စရာ မကျန်တော့အောင် လုပ်ပြီးနေချိန်မှာ တာဝန်ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ဒီကိစ္စအပေါ် အလေးပေးမှု၊ အားထုတ် ဆောင်ရွက်မှုကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာပါပဲ။ အပြစ်တင်လိုခြင်း မဟုတ်ပါဘူး။ အားနာနာနဲ့ အခြေအနေကို အရှိအတိုင်း၊ မြင်တဲ့အတိုင်း ပြောတာပါ။ မလိုအပ်ရင် မပြောချင်ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့.. ယခုနှစ် ဂျူလိုင်လမှာတော့ ကိုမောင်မောင်ဆန်းနဲ့ Myanmar Unicode Area က အဖွဲ့ဝင်တွေ ဦးဆောင်ပြီး "ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား စာပေများ အရေးကို ရှေးရှုပြီး မြန်မာယူနီကုဒ်စံ ကူးပြောင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို အစိုးရက ဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်ပေးပါရန်" ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ရုံးကို စာပို့ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရကဦးဆောင်ပြီး ယူနီကုဒ်ကို စံပြအသုံးပြု ပေးဖို့ ဆိုတဲ့အချက် အပါအဝင် အချက်ပေါင်း (၇)ချက် ပါဝင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ထောက်ခံစာတွေ ပူးတွဲပါဝင်ပါတယ်။ MCF ရဲ့ (လက်ရှိဆောင်ရွက်ချက်ကို တိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးခြင်း မဟုတ်ပေမယ့်) "ယူနီကုဒ်ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထောက်ခံသည်" လို့ ယေဘုံယျ သဘောရှိတဲ့ စာလည်း ပူးတွဲ ပါဝင်ပါတယ်။
ဒီစာရဲ့ ရလဒ်လို့ ယူဆဖွယ်ရှိတဲ့ ရလဒ်အနေနဲ့ "ကွန်ပျူတာသုံး မြန်မာစာစံစနစ် ကူးပြောင်းရေး ဆိုင်ရာကော်မတီ" အစည်းအဝေးကို ပညာရေးဝန်ကြီး ဦးဆောင်ပြီး အဲ့ဒီဂျူလိုင်လထဲမှာပဲ အားချင်း ခေါ်ယူပေးခဲ့ ပါတယ်။ ဒီကော်မတီရဲ့ အစည်းအဝေးဟာ ရှေ့ပိုင်းမှာလည်း အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ MCF, ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာစာအဖွဲ့၊ စသဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း အစုံအလင်နဲ့ MUA ကိုယ်စားလှယ် တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း MUA ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အစည်းအဝေးကနေ "ဝန်ကြီးဌာနအားလုံး ယူနီကုဒ်သာ အသုံးပြုကြရန်" ဆိုတဲ့ အချက် အပါအဝင် စိတ်အားတက်ဖွယ် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ခဲ့တာကို တွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့ တစ်ပြည်လုံး ယူနီကုဒ် ပြောင်းလဲရေးဆိုတဲ့ မူတစ်ရပ်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်စပြုနေတဲ့ ယူနီကုဒ်အရေး လှုပ်ရှားသူတွေလည်း အစိုးရရဲ့ အရေးတစ်ယူ ရှိမှုကြောင့် ပြန်လည်စိတ်အား တက်ကြွ လာခဲ့ကြပါတယ်။
မတ်လ (၃၁) ရက်နေ့မှာ တစ်ပြည်လုံး ပြောင်းကြတော့မယ် ဆိုတော့.. ဥုံဖွလို့ ပြောင်းလို့ မရပါဘူး။ ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်တစ်ရပ် စနစ်တစ်ကျ ရေးဆွဲဖို့ လိုအပ်လာပါတယ်။ MUA အဖွဲ့က ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို ရေးဆွဲတင်ပြသလို၊ MCF ကလည်း ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ် တစ်ရပ်ကို ဝေမျှလာပါတယ်။ အဲ့ဒီပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ် နှစ်ရပ်ကို ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ပြီး နောက်ထပ် ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ် တစ်ရပ် တာဝန်ယူ ရေးဆွဲဖို့အတွက် ဂျူလိုင်လထဲမှာပဲ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အစည်းအဝေး တစ်ခုမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ကိုမောင်မောင်ဆန်း တို့ကို တာဝန်ပေး လာခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်၊ ကိုမောင်မောင်ဆန်းနဲ့ MUA က အဖွဲ့ဝင်တွေ ညှိနှိုင်းပြီး ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ် အသေးစိတ်ကို ရေးဆွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ပါဝင်တဲ့ အချက်တွေကတော့၊ စက်တင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှာ တစ်ပြည်လုံး ယူနီကုဒ်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် အစပြုကြောင်း တရားဝင်ကြေငြာဖို့၊ ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို တာဝန်ယူဖို့အတွက် နည်းပညာသမားတွေ၊ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ၊ ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့တွေ၊ ပံ့ပိုးရေးအဖွဲ့တွေ အပြည့်အစုံ ပါဝင်တဲ့ အမြဲတမ်း အဖွဲ့တစ်ရပ် တရားဝင် ဖွဲ့စည်းဖို့၊ အစိုးရဌာန အားလုံး သတင်းထုတ်ပြန်ချက် အားလုံးကို ယူနီကုဒ်အသုံးပြု ထုတ်ပြန်ဖို့၊ မိုဘိုင်းဖုန်း ထုတ်လုပ်သူတွေ (ပထမအဆင့်) ဇော်ဂျီ၊ ယူနီကုဒ် နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်မှ ပြည်တွင်းကို တင်သွင်းခွင့်ပြုဖို့၊ (ဒုတိယအဆင့်) အသုံးပြုသူအများစု လက်ထဲကို ယူနီကုဒ် အသင့်ပါဝင်ပြီး Device တွေ ရောက်ရှိလာချိန်မှာ တစ်ပြည်လုံး တစ်ချိန်တည်း တစ်ပြိုင်တည်း ပြောင်းမယ့်ရက် ကြေငြာပြီး ဆောင်ရွက်ဖို့ စသဖြင့်၊ အစီအစဉ် အသေးစိတ်၊ အချိန်ဇယား အသေးစိတ်နဲ့ ပါဝင်ရမယ့် အဖွ့အစည်းတွေ၊ ၄င်းတို့ရဲ့ တာဝန်တွေ အသေးစိတ် ပါဝင်ပါတယ်။
အစီအစဉ်အရ MCF နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်ကို လိုအပ်သလို ညှိနှိုင်းပြီး အဆင့်ဆင့် ဆက်လက် တင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရေးဆွဲပေးလိုက်တဲ့ ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်ကို မူအားဖြင့် သဘောတူ ကြပါတယ်။ လက်တွေ့ ကျတယ်လို့ အသိအမှတ်ပြု ကြပါတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင် သင့်ထားတွေ ပြင်ထားကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းပါတယ်။ လက်တွေ့ တာဝန်ရှိသူ ဘက်ကလည်း နှုတ်အားဖြင့် အစီအစဉ်အတိုင်း ဖြစ်စေရမယ်လို့ အတည်ပြု ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ စက်တင်ဘာလကုန်လို့ အောက်တိုဘာလထဲ ရောက်နေပါပြီ။ မျှော်မှန်းထားတဲ့ အစီအစဉ် တစ်ခုမှ ဖြစ်မလာသေးပါဘူး။ တရားဝင် ကြေငြာချက် မထွက်သေးပါဘူး။ အရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့ဖို့ကိစ္စ ပြင်ဆင်တာ မတွေ့ရ သေးပါဘူး။ ဒီထက်ပိုဆိုးတာက ကျွန်တော်တို့ ရေးဆွဲပေးလိုက်တဲ့ အစီအစဉ် ဘယ်အဆင့်ထိ တင်ပြထားလို့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ် ထားတယ်ဆိုတာ မသိရသေးတာပါပဲ။ လက်ရှိ ကွန်ပျူတာ အသင်းချုပ် ဥက္ကဌရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက် တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ ယူနီကုဒ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို Online မှာ မပြောပဲ မျက်နှာစုံညီသာ ပြောကြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ လိုက်နာသင့်တဲ့ အချက် ဖြစ်တာနဲ့အညီ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဒီအချက်ကို လိုက်နာ ထားကြလို့ ဒီရက်ပိုင်း ယူနီကုဒ်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုတွေကို သိပ်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီမျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေး တွေလည်း အခု ခေါ်ယူတာ မတွေ့ရတော့ ပြန်ပါဘူး။ လူကြီးတွေ မအားလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်က တိုက်တွန်းလိုက်ရင်လည်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်.. ကျွန်တော်တို့ဘက်က တိုက်တွန်းမှ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်… အဓိပ္ပါယ်က… ကျွန်တော်တို့လို ပြင်ပ လုပ်အားပေးတွေက တစ်ခုခု အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်လိုက်၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက လိုက်လုပ်လိုက်၊ ပြင်ပ လုပ်အားပေးတွေ ငြိမ်သွားရင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းတွေက လိုက်ငြိမ်သွားလိုက်.. အဲ့သလို ဖြစ်နေပါတယ်။ တစ်ကယ်ဆို တာဝန်ရှိသူတွေက ဦးဆောင်ရမှာပါ။ ဦးဆောင်မှလည်း ဖြစ်မှာပါ။ ပြင်ပ လုပ်အားပေးတွေက ဦးဆောင်ချင်ပါတယ် ဆိုရင်တောင်မှ ဦးဆောင်လို့ ရတဲ့အခြေအနေ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အမှန်တော့.. အခုလို အစိုးရပိုင်းက အသိအမှတ် ပြုနေချိန်လေးမှာ အခွင့်အရေးကို အမိအရယူပြီး ရှိသမျှ ရင်းမြစ်တွေအကုန် အဲ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာ အောချပြီး အင်တိုက်အားတိုက် လုပ်နေရမှာပါ။ ဒီလိုလုပ်နေတာ မတွေ့မိပါဘူး။ မလိုအပ်ဘူးလို့ အခုချိန်ထိ ထင်နေသေး သလားတော့ မသိပါဘူး။ အခုဒီစာကို ရေးဖြစ်တာကလည်း စာရေးယုံကလွဲပြီး တစ်ခြားလုပ်လို့ရတာ ဘာမှမရှိ တော့တဲ့အတွက် ရေးလိုက်ရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
== ၅ ==
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ပြောချင်တာကတော့… တစ်ခြား ကျွန်တော့်လို ယူနီကုဒ် ပြောင်းလဲရေး ပြင်ပလုပ်အားပေးတွေ ဘယ်လို သဘောထားလဲ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်ရေအနေနဲ့ လုပ်နိုင် သလောက်လည်း လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ။ လုပ်စရာကုန်ပြီ။ တိုက်တွန်းသင့် တာလည်း တိုက်တွန်းပြီးပြီ။ အသေးစိတ် အစီအစဉ်ထိ ဆွဲပေးပြီးပြီ။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဆက်လုပ်ချင်ပါတယ် ဆိုလို့မှ ဒီထက် ဆက်လုပ်လို့ရတာ တစ်ခုမှ မကျန်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် တာဝန်ရှိ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အစိုးရတို့ ဆက်လုပ်သည် ဖြစ်စေ၊ မလုပ်သည် ဖြစ်စေ၊ ဘာမှ ဝင်မပါပဲ ထိုင်ကြည့်နေ ပါတော့မယ်။ ကိုယ်စွမ်းသလောက် ကြိုးစားခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါကြောင့်…
"သဗ္ဗေသတ္တာ ကာမသကာ" ပါပဲ။ ဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ချင်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ ဖြစ်ချင်သလိုသာ ဖြစ်ကြပါစေတော့။
တစ်ပြည်လုံး ပြောင်းလဲရေး ဆိုတာကြီး ဖြစ်မဖြစ်ကိုလည်း ပူပန်နေမှာ မဟုတ်တောပါဘူး။ တာဝန်တကယ် ရှိသူတွေတောင် မပူတာ၊ အမှန်ဆို ကျွန်တော်တို့က အနေသာကြီးပါ။ ကိုယ်ခံယူချက် နဲ့ကိုယ် တစ်ကိုယ်ရေပဲ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်သုံးပါမယ်။ တစ်ခြား ဘယ်သူ့ကိုမှ ပြောင်းဖို့ တိုက်တွန်းနေမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့.. တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အခုလို စိတ်ရှည်လက်ရှည် အဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူး တင်ပါတယ်။